ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » USA မှ Breaking News » အသက်သာဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံးအမေရိကန်အားလပ်ရက်ခရီးများ
လေကြောင်းလိုင်း • လေဆိပ် • လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အချက်အပြုတ် • ယဉျကြေးမှု • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • သတင်း • ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • တာဝန်ရှိသော • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News • သတင်းမျိုးစုံ
ခရီးသွားလာရေးကန့်သတ်ချက်တွေအပြည့်အ ၀ ရှိနေသေးတာကြောင့်အမေရိကန်တွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအိမ်နဲ့နီးတဲ့အားလပ်ရက်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်။
Oklahoma City သည်အမေရိကန်မြို့များအားလပ်ရက်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုသည်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့များကိုစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည့်အစားအစာနှင့်အချိုရည်၊ ဟိုတယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည့်အချက်များပေါ် မူတည်၍ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
ဘှဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဘီယာ ဝိုင် စားသောက်ဆိုင် တက္ကစီ (၁ ကီလိုမီတာယာဉ်စီးခ) တစ်လမ်းသွားပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ် တစ်ညတာဟိုတယ်စျေးနှုန်း (ပိတ်ရက်) အားလပ်ရက်တတ်နိုင်မှုရမှတ် /၁၀
1 ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီး, ဥက္ကလာဟိုးမား $3.00 $12.00 $11.50 $1.65 $2.00 $106 8.58
2 Indianapolis, Indiana ပြည်နယ် $3.50 $10.97 $15.00 $1.24 $1.75 $179 8.00
3 တာက်ဆန်, အရီဇိုးနား $4.00 $12.00 $14.00 $1.37 $1.75 $134 7.96
4 နောဖမြို့, Tennessee ပြည်နယ် $4.50 $10.00 $15.00 $1.49 $1.75 $172 7.87
5 San Antonio တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ် $3.60 $12.00 $15.00 $1.52 $1.50 $161 7.77
6 ဟူစတန်, တက္ကဆက်ပြည်နယ် $5.00 $12.00 $15.00 $1.44 $1.25 $136 7.73
7 ဝိန်း Fort Worth, တက္ကဆက် $3.00 $12.00 $15.00 $1.12 $2.50 $145 7.70
8 Louisville က, ကီ $5.50 $10.00 $15.00 $1.43 $1.75 $162 7.67
9 Orlando၊ Floria $4.00 $11.00 $15.00 $1.49 $2.00 $160 7.65
10 Raleigh, North Carolina ပြည်နယ်ရှိ $5.00 $12.50 $15.00 $1.40 $1.25 $134 7.62
လေ့လာမှုအရ Oklahoma City သည်စျေးအသက်သာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် US မြို့အားလပ်ချိန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏တစ်ဝက်အတွက်မြို့သည်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘီယာအတွက် ၃ ဒေါ်လာ၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ၁၁.၅ ဒေါ်လာနှင့်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ၁၀၆ ဒေါ်လာကုန်ကျသည်။ Old West ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါက Oklahoma City သည် National Cowboy & Western Heritage Museum သို့သွားလည်ရန်မဖြစ်မနေသွားလည်သင့်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အမျိုးသား Cowboy & Western Heritage Museum သို့သင်သွားကြည့်ပါ၊ နွားများကို roping လုပ်ခြင်း၊ နွားများမွေးမြူခြင်းနှင့်မွေးမြူရေးခြံတစ်ခုတွင်သင်လုပ်ကြည့်ပါ။ rodeo!
Indianapolis သည်လည်ပတ်ရန်အလွန်စျေးသက်သာသောအခြားမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အထူးသဖြင့်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တစ်လမ်းသွားလက်မှတ် ၁.၇၅ ဒေါ်လာသာကျသင့်ပြီး ၁ ကီလိုမီတာအငှားယာဉ်ခသည် ၁.၂၄ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ Saguaro အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့လည်ပတ်ရန်စျေးအသက်သာဆုံးမြို့များသို့သွားလိုသူများအတွက်နာမည်ကျော် Tuscon နောက်တွင်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှု!
အမေရိကန်မှာစျေးအကြီးဆုံးနေရာ ၅ ခု
1 နယူးယောက်စီးတီး, နယူးယောက် $7.81 $15.00 $20.00 $1.86 $2.75 $309 2.56
2 San Francisco ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, $7.50 $15.00 $20.00 $1.86 $3.00 $231 3.07
3 မက်ဆာချူးဆက်၊ ဘော်စတွန် $7.00 $15.00 $20.00 $1.86 $2.63 $273 3.16
4 ဘရွတ်ကလင်း, နယူးယောက် $7.00 $15.00 $17.00 $1.55 $2.75 $280 3.76
5 Philadelphia တွင်, Pennsylvania ပြည်နယ် $5.00 $15.00 $15.00 $3.42 $2.50 $244 3.94
အမေရိကန်တွင်သာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပါလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာတစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုမြင်ရသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ နယူးယောက်စီးတီး အိမ်နီးချင်းဘရွတ်ကလင်းသည်အဆင့် ၄ နေရာတွင်ရှိနေပြီးစျေးအကြီးဆုံးအမေရိကန်အားလပ်ရက်ခရီးလည်းဖြစ်သည်။ ဘီစီ (၇.၈၁)၊ ဝိုင်တစ်ပုလင်း (၁၅ ဒေါ်လာ)၊ စားသောက်ဆိုင်အတွက်ဒေါ်လာ (၂၀)၊ ဟိုတယ်တည်းခိုခ (တစ်ညလျှင် ၃၀၉ ဒေါ်လာ) အတွက် NYC သည်စျေးအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခြားနာမည်ကြီးသောမြို့တစ်မြို့သည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိပြီး San Francisco သည် New York နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီးအခြားစျေးနှုန်းများနှင့်မနီးမဝေးတွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏အထင်ကရနေရာများနှင့်ဗိသုကာလက်ရာများကြောင့်အလွန်နာမည်ကျော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်မြို့တော်သည်ခရီးသွားများအတွက်စျေးနှုန်းမြင့်တက်စေသောမြို့တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။